Home » အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေ » ဖြည့်စွက်သဘောတူညီမှုရ: Keto သင်၏အန္တရာယ်အခမဲ့ Bottle သတိုင်ကြားပါ
သင့်ခန္ဓာကိုယ် ketosis ၌တည်ရှိ၏သောအခါ, အစား carbs ၏စွမ်းအင်အဘို့အဆီဆဲလ်များကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Kara-Keto နှင့်အတူ, သင်သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် Kickstarter ကကူညီနိုင်သည်!
သတင်းတောင်မှပိုကောင်း ... ဖြစ်ပြီး Keto တစ်ပုလင်းတွေထုတ်ကြိုးစားနိုင် အန္တရာယ်အခမဲ့ !!!
Kara-Keto , ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူကူညီခေါင်းမာဗိုက်အဆီရှို့ကူညီခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အစာခြေခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုထောကျပံ့မညျဖွစျကွောငျးတစ်ပြောင်းလဲနေသောနှင့်အစွမ်းထက် ketosis အစားအသောက်ဖြည့်စွက်သည်။ ဤတွင်အဘယ်အရာကိုသင်ဤ Keto ဖြည့်စွက်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖြစ်ပါသည်:
မှတ်ချက် ကျေးဇူးပြု. : သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်ရှိသည်လျှင်ဒီအန္တရာယ်အခမဲ့ Keto ပုလင်းကမ်းလှမ်းမှုကိုသာတရားဝင်သည်။
သငျသညျသြစတြေးလျ, ကနေဒါ, အိုင်ယာလန်မှာတည်ရှိပါတယ်နေတယ်ဆိုရင်, စင်္ကာပူ, ဒါမှမဟုတ်နယူးဇီလန် ဒီအန္တရာယ်အခမဲ့ keto ပုလင်းကမ်းလှမ်းမှုကိုထုတ်စစ်ဆေး